5 zvinyorwa zvitsva izvo isu tiri kutarisira kuve nazvo muruoko | Bezzia
5 zvinyorwa zvitsva izvo isu tiri kutarisira kuti tiwane maoko edu
Edhisheni haizorore uye kunyangwe muzhizha vanotipa mazino akareba ne nhau dzekunyora dzakasvika kana dzichasvika mumakataro avo mukati memwedzi waNyamavhuvhu naSeptember. Isu takaunganidza mamwe acho; zvishanu, kunyanya, kuti isu tiri kutarisira kuti tiise maoko edu uye izvo zvinongowedzera kune edu eku-ita zvinyorwa. Tsvaga izvi zvishanu zvinyorwa zvitsva nesu!
1 Vanyengeri vemhiripiri
2 Hondo dzemukati
3 Makomo ekare
4 Kure neegypt
Munyori: Monika sznajderman
Musi Wakasunungurwa: 23/06/2021
Kwemakumi emakore, nhoroondo yemhuri yemunyori Monika Sznajderman yakavanzika mune zvakavanzika. Baba vake havana kumboda kumuudza nezve zvaakasangana nazvo panguva yehutongi hweNazi muPoland, uye haana kumuudza zvishoma nezvebazi rababa vemhuri: nepo maLacherts, mhuri yevaridzi venzvimbo yeKaturike vane mbiri muVolinia kwakabva amai vake, vanga vanzwa nyaya uye anecdotes emarudzi ese, emaRadoms, mhuri ine hunyoro yechiJuda kwakabva baba vake, hapana kana chaaiziva.
Pepper Counterfeiters anorondedzera kuferefetwa kwakaitwa naSznajderman kununura hama dzavo dzechiJuda kubva mukukanganwa: Kuburikidza netsamba, mifananidzo, mabhuku uye zvinyorwa zveveruzhinji, anoteedzera zvinoitika kumadzitateguru ake, izvo zvinonyanya kuve zveruzhinji rwePoland munguva yechipiri Hondo Yenyika. Nyaya isinganzwisisike inosanganisa rondedzero yepedyo nemagwaro akasimba ekuputsa runyararo rwakatenderedza imwe yenguva dzinotyisa munhoroondo yenyika.
munyori: Joseph Zarate
Musi Wakasunungurwa: 06/08/2021
Mushure mekudzokera kumidzi yake yeAshaninka, Edwin Chota anorwira kutema matanda zvisiri pamutemo munharaunda yeAmazon yeSaweto kusvikira apfurwa akafa nevatengesi vematanda. Máxima Acuña, murimi uye mufudzi kubva kuAndes yeCajamarca, anozeza kusiya izvo zvaanoona sefuma yake kunyangwe paine chirongwa chekuchera Conga, icho chiri kutsvaga kutora goridhe pamiganhu imwechete. Osman Cuñachí ane makore gumi nerimwe anoonekwa akashambidzwa nemafuta mumufananidzo unofamba nyika uye unoteura kurasira kwakasvibisa nharaunda yeNazareta uye rwizi uko vanhu veAwajún vakashambira nekuredza.
Yakanyorwa nehutapi hwehutori uye yekunyora kwemapepa, idzi nhoroondo naJoseph Zárate - akapa 2016 Ortega y Gasset Prize uye 2018 Gabriel García Márquez Prize - kwete chete tsvaga kushora zvemagariro, zvehupfumi, zvematongerwo enyika nehondo yezvakatipoteredza iyo inoputika mukati mePeru. Ivo vanovhenekera pachedu, zvepfungwa uye zvehondo zvehondo zvevarume nevakadzi avo, nekuda kwemamiriro akasiyana, vanosarudza kudzivirira nekuchengetedza nyika, tsika uye kuzivikanwa. Chii chatiri kukwanisa kuita - semunhu mumwe nemumwe, sevanhu - muzita reyatinoti "budiriro"?
munyori: Enrique Andres Ruiz
Musi Wakasunungurwa: 30/08/2021
Iye munyori weMakomo ekare anodzokera kumba kwemhuri, muSoria, mushure mekufa kwababa vake. Ikoko anofanirwa kutora nzvimbo yepasi iyo, kure nekufungidzira kweimwe nguva, ikozvino inoda kuchengetwa kwemiti, kubviswa kwetsoka, gadziriro dzekurwisa moto. Mukugara kwake kwakateerana munzvimbo ino nemipimo isina kujeka, pakati pemaruwa neguta diki rematunhu, achaburitsa "mutinhimira usingafambe asi iwo wega." Asi, zvakare, ichaburitsa runyararo uye hunyengeri kuziva kweNhoroondo: yeavo varume nevakadzi vakanganikwa neiyo republic nehondo yevagari yakapfuura, kutama kwekupona ..., uye hupenyu, muchidimbu, mune zvakakosha kwazvo kuderera uye kuratidza.
Nechirevo chayo chakareruka, chakamisikidzwa nehupenyu hwekutaura kwakakurumbira, uye yakajairika cadence yekufunga, pakati penoverengero nerondedzero inonzwisisika, Los montes Antiguos ndeyekuda kubvunza kupokana nechero ruzivo rwekuzvarwa kana kutapira kushuvira. Kurwisana nengano yenyika yeEdheni, asiwo nekukanganwa. Rudzi rweVirgilian yechiGeorgia yemazuva ano yakayambuka neyakaitika iyo inofananidzwa mune vakatendeka pachiyero, pamwe nekufungirana kumwe chete, hunhu uye nhoroondo.
munyori: Andre Aciman
Musi Wakasunungurwa: 6/09/2021
Ari Kure neEjipitori, André Aciman anoyeuka yake hudiki mune yakaisvonaka uye tsika dzakasiyana Alexandria nekuuya kwemhuri yake yakasarudzika, maSephardic maJuda ane midzi yeTurkey neItaly, kubva pakusvika kwake muguta pakutanga kwezana ramakore kusvika kudzingwa kwake mumaXNUMX, apo munyori aive achiri kuyaruka. Mhuri yakaumbwa nemifananidzo seyakashinga sezvo isingazivikanwe: Sekuru Vili, aimbozvitutumadza-musoja, muFascist weItaly uye musori weBritish; vanambuya vaviri, "musande" uye "mwanasikana wamambo," vanokwanisa kuita makuhwa mumitauro mitanhatu, kusanganisira Ladino; amai, Gigi, mukadzi matsi ane maoko ekutora; kana Tete Flora, mupoteri weGerman uyo asingamire kurangarira kuti maJuda vacharasikirwa nezvose zvavanazvo "kanokwana kaviri muhupenyu hwavo."
Inoyevedza uye inoyevedza, ine hungwaru hweProustian maungira, idzi ndangariro dzakanaka, dzakavakwa nenzira yemhuri huru sagas, dzinokwanisa kuputira muverengi nenyaya isingakanganwiki uye protagonists.
Munyori: Elizabeth von arnim
Musi Wakasunungurwa: 8/09/2021
Iye mudiki uye asina mhosva Lucy Entwhistle achangobva kurasikirwa nababa vake apo paanosangana nemurume akafirwa Everard Wemyss netsaona. Anokura, anoteerera, uye ane chivalrous, Wemyss anomudzivirira nekumutungamira sezvaiitwa nababa vake. Kana mushure memazuva mashoma achikumbira kuroora, Lucy, akavhiringidzika uye asingabatsiri, anotambira. Nekudaro, mumvuri uri kukura unodzikisira mufaro wake: mweya weVera, Wemyss 'mukadzi wekutanga, uyo akafa mumamiriro asinganzwisisike.
Kufuridzirwa neicho chiitiko chemunyori uye yakaburitswa isingazivikanwe muna 1921, iyi yechinyakare yekufungidzira kwepfungwa, muenzaniso usingarambike waRebecca, naDaphne du Maurier, inotsvaga yakavhiringidza uye nerima divi remuchato.
Pane chero eaya mabhuku ekunyora anobata pfungwa dzako here? Kana iwe uri wekutarisa akateedzana iwe uchawanawo muna Nyamavhuvhu paNetflix zvakawanda zvitsva maficha kuti unakirwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » tsika nemagariro » 5 zvinyorwa zvitsva izvo isu tiri kutarisira kuti tiwane maoko edu
Zvigadzirwa zvekugadzira: Pfungwa dzekushongedza imba yako nadzo
5 manomano ekuchengetedza imba nguva dzose yakachena uye yakashambidzika